500w onye ọ bụla na-agba ịnyịnya ibu taya ebike | ebike Shuangye
Mbido ngwaahịa kacha mma igwe eletrik 500w onye ọ bụla na-agba ịnyịnya na-agba agba ebike A7AT26
500w onye ọ bụla na-agba ịnyịnya na-agba agba ebike A7AT26
Okpokoro: Ọdịdị Uhie Okpomọkụ nke Aluminom
Motorgbọala: 48V 500W (F / R)
Batrị: 48V 20Ah batrị lithium nke mbughari (H3-26F)
Ogologo Max: 60km - 80km kwa ụgwọ
Oge nkwụ ụgwọ: 6-8 awa
Gear: shimano 7/21 ọsọ
500w all wheel drive fat taya ebike
Nke a bụ ihe dị ike abụba ụra buru ibu na-enye kwa ụbọchị ibugharị, pụrụ n'ụzọ, irughari ya sọrọ moto imewe. Ga-enwe ike iji nweta onwe gị karịrị ugwu ọ bụla na-enweghị nsogbu ọ bụla ma ọlị. Igwe eletrik a na-enye ma pedal eletrik na-enye aka maka ndị chọrọ inwe mmega ahụ na arụmọrụ zuru ezu maka onye ọ bụla chọrọ ịnụ ụtọ n'èzí.
N'ihu na n'azụ 500W brushless hub Motors nwere nnukwu torque na-enye gị ohere ịgafe ala dị iche iche n'ụzọ dị mfe. N'iji igwe eji agba ugbo ala, i nwere ike ịga ebe obula ichoro, ma nye uzo kacha elu 40 ruo 45 km / h. Motorgbọala nke ọ bụla ji arụ ọrụ karịa pasent 80 na n'okpuru 60 Db mkpọtụ. Wetara gị arụmọrụ dị elu ma ọfụm na ịnya ụda mkpọtụ.
Ikike batrị 48v 20ah batrị ga-ezute gị karịa ike chọrọ. Site na ọrụ mbughari mee batrị dị mfe mbughari chajie. Naanị nkeji elekere asatọ nke iteghete iji tụọ juputa na chaja nke 6V 8A.
Igwe ihu ọchị nwere ike igosi gị ọtụtụ data e-bike mgbe ị na-agba, dịka ọmụmaatụ, Anya, Mileage, Okpomoku, ikike batrị, ike ọkụ wdg O nwekwara ike ịrụ ọrụ dị mma na ọnọdụ mmiri ozuzo n'ihi mgbochi mmiri ya.
Ejiri sistemu igwe diski 180mm na-arụ ọrụ, na-enye nkwado ike dị egwu ozugbo n’elu ugwu ma ọ bụ ntopute. Gbaa mbọ hụ na nchekwa nke ịnya igwe gị oge ọ bụla.
26 * 4.0 anụ ọhịa nwere abụba nwere ikike ịmịpụta karịa, ikike kachasị mma na njigide dị elu. Na agbanyeghị ala ọ bụla, ọ nwere ike dịrị ha mfe ijikwa ha, dịka ụzọ ugwu siri ike, n'okporo ụzọ obodo, snow, osimiri ma ọ bụ unyi.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na nnukwuke ebike, gaa na 750w igwe elektriki igwe elekere abụọ, 1000w e-igwe kwụ otu ebe, 2000w abụba ebike
Tags:abụba buru ibu igwe eji egbe ugbo ala
Mbụ: 60V 2000W na-eme ka ọkụ eletriki eletriki igwe eletrik ọsọ ọsọ 55km / h A7AT26
Next: Egwuregwu igwe kwụ otu ebe ọhụrụ A6AH26MD